EOTC Afaan Oromo – Page 16 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Meanwhile lets just say that we are proud EOTC Afaan Oromo contributed a whooping 167 entries.
November 29, 2014 in Dubbii Qulqullootaa /by EOTC Afaan Oromo
October 17, 2014 in Barumsa Amantaa /by EOTC Afaan Oromo
September 28, 2014 in Barumsa Amantaa /by EOTC Afaan Oromo
September 8, 2014 in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Waldaan Qulqullootaa yaa’ii 11ffaa gaggeesse
Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti Waldaan Qulqullootaa yaa’ii waliigalaa 11 ffaa hagayya 25 fi 26 galma waajjira Waldaa qulqullootaa keessatti gaggeesseera. Yaa’ii kana irratti Ittigaafatmtoonni wiirtuulee,wiirtuulee aanotaa, bakka buutonni yaa’ii moraalee, bakka buutonni wiirtuulee biyya alaa, fi keessummoonni kan hirmaatan yoo ta’u abbootiin mana kiristaanaas hirmaataniiru.
Waldaan Qulqullootaa yaa’ii waliigalaa kan gaggeessu waggoota lama lamaan yoo ta’u, yaa’iin ammaa kun yaa’ii waliigalaa 11ffaa akka ta’e ibsameera. Hirmaattonni Yaa’ii kanaa hagayya 24 kan finfinnee galan yoo ta’u, galgala sana ergaan baga nagaan dhuftani jedhuu fi sirni miila dhiqaa gaggeeffameera.
Yaa’ii guutuun kan gaggeeffame hagayya 24 fi 25 guyyaa fi halkan walitti fufee ture. Yaa’ii kana irrattis marii bal’aanii fi murteewwan gara garaa kennamaniiru.
September 2, 2014 in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Dn. Tolasaa Taayyee Badhaasa Geeba Yuunivarsitii irraa argate Waldaa Qulqullootaatiif Kenne.
Yuunivarsitii Walloo Kaampaasii Daseetti Barumsa Idilee isaa hordofaa turuun qabxii Ol’aanaa galmeessisee Geeba Yuunivarsitii badhaasa barattootaatiif dhiyaate kan fudhate Daaqon Tolasaa Taayyee badhaasa argate Waldaa qulqullootaatiif kenne.
Dn. Tolasaan Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Mana sibuutti kan dhalatee guddate yoo ta’u barumsa isaa qabxii gaarii galmeessisuudhaan gara Yuunivarsitii Walloo daseetti ramadamee barumsa isaa hordofaa tureera. Dabalataanis yeroo mooraa kana keessa turetti yaa’ii mooraa keessatti ittigaafatamummaa adda addaa akka fudhate mana kiristaanaa tajaajilaa tureera. Barumsa Yuunivarsitii keessatti kennamuunis cimee qu’achuudhaan qabxii 4:00 fi A+18 fiduun Qabxii Daraan olaanaa galmeessiseen ankii Daraan olaanaa ta’een eebbifameera. Sirna eebbaa kana irrattis badhaasa Yuunivarsitichi barattoota qabxii olaanaa galmeessisaniif qopheesse hunda caaluudhaan geeba Yuunivarsitichaa fi Meedaaliyaa qophaahe badhaafameera. Haata’u malee Dn. Tolasaan Badhaasa argate kana ofiif fudhatee galuu hin barbaanne geeba argate Waldaa qulqullootaatiif Yemmu kennu Meedaaliyaa isaa ammo Mana Kiristaanaa isa guddiste, Mana Kiristaanaa Madihaanee’aalamii Daabbusiif kennee jira. Dn. Tolasaan Hagayya 24 Waldaa qulqullootaatti qaamaan argamee waldaan kun yaa’ii isaa 11ffaa osoo gaggeessaa jiruu badhaasa argate kenneefii jira.
August 21, 2014 in Dubbii Qulqullootaa /by EOTC Afaan Oromo
Hundeenshee tulluuwwan qulqulluurraati
August 13, 2014 in Lallaba /by EOTC Afaan Oromo
Hundeenshee tulluuwwan qulqulluurraati (Faar 86: 1)
Dn. Dajanee Gasheetiin
Jecha kana kan dubbate Waaqayyo kennaalee hedduun kan isa eebbise, mootii Israa’eel kan ture Raajicha Daawiiti. Kennaawwan hedduu inni ittiin ebbifame keessaa tokko kennaa raajii dubbachuu ture. Bakka kanatti kaayyoon inni itti raajii kana dubbateef, Waaqayyo Dubroo Maariyaam foonsheerraa foon, lubbuusheerraa lubbuu fudhachuun Tokkoomaaf (Tawaahidoof) ishee filachuusaa hubachiisuufi. Raajichis wanta qabatamaan mul’atu Tulluu Tsiyoonitti fayyadamuun, tulluu iccitii kan taate waa’ee Qulqulleettii Dubroo Maariyaam dubbateera. Barnoota kana keessatti Dubroon Maariyaam tulluu qulqulleettii tulluuwwan qulqullootarraa argamte ta’uushee baranna. Akka fedha Waaqayyootti, maaliif akka tulluutti fakkeeffamtes ni mari’anna. Sagalichis akkas jedha:
Bu’uuronnishee tulluuwwan qulqullootarraati. Dunkaanota Yaa’iqobirra Waaqayyo balbaloota Tsiyoon jaalata. Yaa magaalaa Waaqayyoo waa’ee kee wanta dinqiitu dubbatame. …Namni haadha keenya Tsiyoon isheetiin jedha; ishee keessattis namni dhalate; Inni Ol Aanichi ofumasaa ishee hundeesse (Faar. 86: 1-5).
Sagaleen armaan olii waa’ee iccitii Tulluu Tsiyoon nu hubachiisa. Jechi Tsiyoon jedhu hiika afuuraa hedduu qaba. Kanaaf, icciticha hubachuuf maalummaa Tsiyoonirraa eegaluu qabna.
August 4, 2014 in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
August 1, 2014 in Dubbii Qulqullootaa /by EOTC Afaan Oromo
July 15, 2014 in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo